करिब ९० प्रतिशत सर्पदंश विषालु सर्पले गरेका हुँदैनन् । बाँकी १० प्रतिशत विषालु सर्पले टोके पनि सबैले आफ्नो विष मानिसको शरीरमा छोडेका हुँदैनन् । तर अधिकांश सर्पदंशपछि विषले भन्दा पनि आँत्तिएर मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ ।
पछिल्लो पटक धरानलाई मात्रै डेंगु प्रभावित क्षेत्र मानेर संक्रमण दर रोक्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका बेला संघीय राजधानी काठमाडौंमा पनि बिरामी भेटिएको छ । काठमाडौंमा एक महिलामा डेंगु देखिएको हो ।
कांग्रेस नेता सिंहको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको स्वास्थ्य स्थिति सुधारोन्मुख रहेको अस्पतालले जनाएको छ । सिंहलाई मधुमेहसँगै पिसाबमा संक्रमण देखिएपछि सोमबार मेडिसिटी अस्पताल भर्ना गरिएको थियो।
तपार्ईंमा भाइरल हेपाटाइटिसको संक्रमण त छैन ? एक सामान्य परीक्षणले आफ्नो शरीरमा यो भाइरसको उपस्थितिबारे यकिन हुन्छ । धेरै नेपाली आफूलार्ई भाइरल हेपाटाइटिस छ वा छैन भन्ने जानकार छैनन् ।
वर्षायाम सुरु भएसँगै कतिपय मानिस खुट्टाका औंलाका कापमा घाउ हुने समस्याबाट पीडित हुन्छन् । खासगरी खेती किसानीमा लाग्नुपर्नेलार्ई यो समस्याले बढी सताउने गर्छ । त्यसैले यसलार्ई बोलीचालीको भाषामा यसलार्ई हिलोले खानु भनिन्छ ।
शिक्षण अस्पतालमा दोस्रो पटक कलेजो प्रत्यारोपण
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा दोस्रो पटक कलेजोको सफल प्रत्यारोपण गरिएको छ । शुक्रबार ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल प्याङ्क्रियाज र कलेजो प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सक प्रा.डा.रमेश सिंह भण्डारीको नेतृत्वमा कलेजोको सफल प्रत्यारोपण गरिएको हो ।
डुबानमा परेका मधेसका जिल्लाहरूमा सर्पदंशको घटनामा बृद्घि भएपछि विज्ञहरूले सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।
सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले पछिल्लो साढे दुई वर्षमा ४ सय २९ जनामा मृगौला प्रत्यारोपण गरेकामा शतप्रतिशत सफल भएको जनाएको छ । केन्द्रले २०७३ मंसिर ११ यता उक्त संख्यामा प्रत्यारोपण गरेको हो ।
के तपाईं हामीले सेवन गर्ने तरकारीमा विषादीको उच्च मात्राको अवशेष त छैन ? तरकारीको नाममा हामी मन्द विष त सेवन गरिरहेका छैनौं ? यदि छ भने, यसले तत्काल केहि समस्या पैदा नगरेपनि कालान्तरमा यसले स्वास्थ्य सम्वन्धि जटिलता, क्यान्सर, बाझोपना तथा अन्य रोग निम्त्याउँछ ।